Lake Inari Mobile Cabins - I-Airbnb
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguEsko
Yiva i-arctic kwaye ulale kakuhle kwikhabhathi eyodwa ehambayo kumkhenkce weLake Inari (Dec-April)! Ubumfihlo, indawo ebanzi yendalo kunye nethamsanqa elincinci: izibane zasemantla. Wamkelekile ngokufudumeleyo!
Ukulala kwikhabhathi etofotofo kwichibi elinomkhenkce obanzi ngoDisemba-April. Ukuba imozulu imbi kakhulu (-25 degrees okanye kubanda) iikhabhini zindwendwela kamsinya nje emkhenkceni okanye zihlale kwinkampu eyindawo efanelekileyo yokubukela i-aurora nayo. Imisebenzi kunye nolwazi nceda ujonge lakeinari$com. Ixabiso lobusuku lilabantu aba-2, ixabiso elinye yi-50eur.
Ukuzola, i-arctic, ubusika bokwenene, izibane ezisenyakatho, imisebenzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Esko
Ndiza kuba senkonzweni yakho. Kukho zonke iintlobo zemisebenzi ekhoyo kwinkampu yesiseko kunye nedolophana, khangela i-lakeinari $ com, i-visitinari $ fi kunye ne-Siida $ fi.